Wasiirka warfaafinta Galmudug: “Waxaa la joogaa waqtigii shacabka ay oran lahaayeen dooni meyno argagax” Wasiirka warfaafinta Galmudug: “Waxaa la joogaa waqtigii shacabka ay oran lahaayeen dooni meyno argagax” – Somnews
You are at:Home»WARARKA»Wasiirka warfaafinta Galmudug: “Waxaa la joogaa waqtigii shacabka ay oran lahaayeen dooni meyno argagax”
Wasiirka warfaafinta Galmudug: “Waxaa la joogaa waqtigii shacabka ay oran lahaayeen dooni meyno argagax”
Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa shaacisay in deegaannada Caad & Ceel-Cabdi lagu dilay 22 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii dadka deegaanadaasi ay ka biyo diideen lacago baad ah oo ay Shabaabku ka qaadi rabeen.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan (Mesagaway) ayaa sheegay in shacabka Galmudug gaar ahaan shacabka deegaanada Caad & Ceel-Cabdi ay yihiin geesiyaal diiday in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay qasbaan oo argagax joogta ah ku hayaan.
Wasiir Mesagaway ayaa yiri “Shacabka deegaanada Caad & Ceel-Cabdi oo kaashanaya ciidamada Galmudug ayaa dagaal la galay kooxo maleeshiyaad ah oo shacabka deegaanka ku hayey argagax iyo cagajugleen joogta ah. Galmudug waxey soo dhoweyneysaa shacabka yiri kooxaha argagaxisada ah waa inaan iska caabinaa oo dagaal la galay, isla markaasna ka dilay maleeshiyaadka argagaxisada 22 ruux tanoo ah guul u soo hoyatay shacabka.”
Wasiir Mesagaway oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Waxaa la joogaa waqtigii shacabka ay oran lahaayeen dooni meyno argagax, dagaalkii maantana waa tusaale fiican oo aan rabno in shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay iska dulqaadaan argagaxa joogtada ah ee kooxaha Al-Shabaab. Dagaalkii maanta ka dhacay Caad & Ceel-Cabdi waxaa kooxaha argagaxisada looga dilay 22, isla markaasna looga dhaawacy 30 ruux. Dhanka shacabka iyo ciidanka GalMudug waxaa ka dhintay hal ruux, waxaana dhaawac soo gaaray hal ruux. Ciidanka Galmudug iyo shacabka oo iskaashanayana waxey soo furteen hub fara badan iyo saanad ay kooxaha argagaxisada ah ku damacsanaayeen in shacabka ku gumaadaan. Deegaanka Caad & Ceel-Cabdina waa laga saaray kooxihii argagaxsiada ahaa shacabka deegaankana waxey caawa ku seexanayaan neecow nabad ah iyo amni la isku haleyn karo.”
Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa ugu danbeyntii ugu baaqay shacabka Galmudug inay ciidamada la shaqeeyaan si amniga deegaanka loo sugo.